Fashion Trend ဆိုတာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဖက်ရှင် Trend ရဲ့ ပြောင်းလဲပုံကို ကြည့်ရင် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မသိမသာ လိုက်ပါလာတဲ့ အပြောင်းအလဲ၊ လက်ရှိအချိန်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဟုန်းဟုန်းတောက် လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ စတိုင်လ် လုံးဝမတူဘဲ သိသိသာသာ ကွဲပြားသွားတဲ့ အပြောင်းအလဲ၊...
လမ်းမထက်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး... လမ်းမထက်မှာ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွား... လမ်းမထက်မှာ အမိုက်စား... Pyae Wadi Maung Makeup & Hair - Jeccia Han Outfit - Shayi (City Mall) Car - Ford Myanmar Photo - Thardu Ko Ko
Designer Y Stone People ရဲ့ ဒီဇိုင်နာကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ကချင်ရိုးရာဒီဇိုင်းကို ချည်ထည်နဲ့ တခြားအတွဲအစပ်လေးတွေလုပ်ပြီး နည်းနည်း ထူးထူးခြားခြားလေး ဖန်တီးထားပါတယ်။ ကချင်ရိုးရာဂျတ်ခုတ်ထည်ကို ခါးအမြင့် ရင်ခေါင်းကျော်အထိ ဝတ်လို့ရတဲ့ ဘောင်းဘီပုံစံ၊ အောက်ဖျားမှာ ခေါင်းလောင်းပုံကို အခွဲတွေခွဲပြီး ...
SHIRT - BUTTON N STITCH COAT - GIOVEN KELVIN PANTS - GIOVEN KELVIN BELT - SIGNATURE SHIRT - TUCANO PANTS - TUCANO BAG - TUCANO SHIRT - GIOVEN KELVIN PANTS - SIGNATURE SHIRT - SIGNATURE PANTS - SIGNATURE BELT - SIGNATURE MODEL - WILLIAM TUN MUA - OMEGA MEE MEE OUTFIT - ICON FASHION COMPLEX...
တေးသံရှင် Alex ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမြွာသမီးနဲ့သား Dora Alex နဲ့ Kevin Alex... တစ်မိနစ်ပဲကွာတဲ့ အမြွာမောင်နှမနှစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ချစ်ကြတဲ့မောင်နှမ… သူတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ သွက်လက်နေတဲ့ ဟန်ပန်နဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့အတူ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေအြေ...
ကုန်ကျစရိတ်လည်းနည်းတယ် လှလှပပလေးနဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ကြမယ်ဆိုရင်.. Hand Made လက်ပတ်လေး... အိမ်မှာ အလှဆင်ကြမယ်...
Plus Size တို့ လှနိုင် လန်းနိုင် ဖက်ရှင်ကျနိုင်ဖို့
စစ်မှန်တဲ့ အလှအပကို အဝတ်အစားပေါ်က Size ၊ ပေါင်ချိန်စက်ပေါ်က ကိန်းဂဏန်း၊ ပေကြိုးပေါ်က အတိုင်းအတာတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ လှပမှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါ လူတစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ အမြင်အပေါ်လိုက်ပြီး စံ တွေ၊ သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ လှပမှုကို ရှာဖွေဖို့ သင်လုပ်ရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓ...
X-Box Photography by Jason Slip Stylist - Judson Fish MUA - Thet Thet (Art Creation)
Designer Ma Pont (My Favourite) People မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကဏ္ဍအတွက် ကျွန်မ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းက ရိုးရှင်းပြီး Summer Collection ဘက်ကို သွားတာမျိုးလေးပါ။ များသောအားဖြင့် ဒီဇိုင်းဆို ဆန်းပြားထူးခြားတာတွေကြိုက်သလို ဒီရက်ပိုင်းမှာလည်း အဲဒါမျိုးတွေ ချုပ်တာများနေတဲ့အတွက် ဒီကဏ္ဍမှာတော့ Ready to wear ထုတ်မယ့်...
Let’s Have A Cheers!!! Friendship Goals!!!
Model - Khin Bhone & Rebecca Win Photo & Retouch - Aung Ye Linn (Shane Photography) Makeup & Hair - Hello (Ma Cho၊ Ma Khaing) Stylist - Ei Kay Outfit - Mango Myanmar Outfit - Little Things She Need Accessories - Little Things She Need